ဒီနေ့က ကိုIstein ရဲ့မွေးနေ့ပါ.... — MYSTERY ZILLION
ဒီနေ့က ကိုIstein ရဲ့မွေးနေ့ပါ....
ကိုistein မွေးနေ့မှာ ပျော်ပျော်ကြီးနေနိုင်ပါစေ(အီးပါတဲ့ အိုင်းစတိုင်းလို ညဏ်ရေထက်ပါစေ)...
ကိုIstein ကြီး မွေးနေ့မင်္ဂလာပါ ............
ကိုIstein မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေ ............
နောင်နှစ်ပေါင်း 120 တိုင်အောင် ကိုIstein ရဲ့ ချစ်တဲ့ မိသားစု သူငယ်ချငး်တွေအားလုံးနဲ့
Birthday Present for you ....... \_:D/
"Happy Birthday to You" is often sung whenabirthday cake is brought toaparty table before the person with the birthday blows out the candles.
The actual U.S. copyright status of "Happy Birthday to You" began to draw more attention with the passage of the Copyright Term Extension Act in 1998. When the U.S. Supreme Court upheld the Act in Eldred v. Ashcroft in 2003, Judge Breyer specifically mentioned "Happy Birthday to You" in his dissenting opinion. Professor Robert Brauneis went so far as to conclude "It is doubtful that 'Happy Birthday to You', the famous offspring of 'Good Morning to All', is really still under copyright", in his heavily researched 2008 paper.
Happy Birthday အိုင်းစတိုင်းရေ....
ပညာတွေတိုးပွားပြီး ဒီထက်မက ကလိနိုင်ပါစေ...
့Happy Birthday ပါ ကို istein။
Happy Birthday Mr.Istein. Haveagreat life.
အားလုံးသောမိတ်ဆွေအပေါင်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် အခုတလော ကျွန်တော့ Universe of Girlfriends တွေနဲ့ New York မှာ Party ပွဲသွားကျင်းပနေလို့ ဒီ post လေးကို မြင်တာနောက်ကြသွားတယ် Sorry နော်။ ကဲကဲဘော်ဘော်တို့ဘာစားကြမလဲပြော။ စားချင်တာအားလုံးဝယ်ကျွေးမယ်။ မြန်မာပြည်ပြန်ဖို့ လေယာဉ်လက်မှတ်တော့စိုက်ပေးကြနော်။
လက်ဆောင်အတွက် ကျေးဇူးပါ။ ဘော်ဘော်ကြီး အကုန်အကျတော်တော်များသွားပြီ။ ဒါပေမဲ့ အီဖေကိုကကားမစီးတော့ဘူး ဂတ်စ်အိုးကြောက်လို့ အဲလေယောင်လို့ လေယာဉ်ပျံပဲစီးသကွဲ့။ ဒီနှစ်ဆို 15 နှစ်တင်းတင်းပြည့်ပါပြီကွယ် (သားလေးအသက်ပြောပါတယ်) နောက်တာနော် လူပျိုပါဆိုမှ ကလေးရှိစရာလားလို့။:D
@Nwe Ni Soe
ကျေးဇူးပါ အမနွယ်နီရေ။ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေ။ ဒါပေမဲ့ အမဆုတောင်းတဲ့အထဲမှာ ချစ်တဲ့ မိသားစု နဲ့သူငယ်ချငး်တွေပဲပါပြီး ကောင်မလေးတွေကဘယ်ရောက်သွားတာလဲဟင်။
ကိုAlexander ရဲ့ကိတ်မုံ့စားလို့ကောင်းလိုက်တာဗျာ ပလပ်ပလပ် (ကိတ်မုံ့စားသံ)။ ဒါနဲ့အောက်က Happy Birthday အော်နေတဲ့ကောင်လေးက ကိုAlexander ရဲ့ဘယ်သူလဲဟင်
ကလိကောင်းလို့ ဒီမှာတယောက် အူခေါက်နေပြီ
ကို X C Ter ကျွန်တော်က ကောင်မလေးချောချောလေးဆို အနားမှာများလွန်းလို့ စိတ်ကုန်နေပြီ။ အခုလွတ်လပ်မှုပဲ လိုချင်တာ။ ပေးတဲ့ဆုနဲ့တလုံးတဝကြီးပြည့်ပါစေဗျာ (ဟဘာကြီးလဲဟ အခုပဲ စာကလေးကြော် အခုပဲရွှေထမင်း)
ကျေးဇူးပါ ကိုpyaepxyoaung လူတောထဲ kiss မပေးရဘူး အနော်ရှက်တတ်တယ်ဗျ
Thank you very much ကိုတက်လူ. I hope you the same.
ကို Istein ကြီး... Happy Birthday ပါဗျို့... ။
Istein ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးနဲ့လိုက်အောင်များများတီထွင်စမ်းသပ်နိုင်ပါစေဗျာ..။ ( ဗရုတ်သုတ်ခ ၊ ပေါက်ကရတွေ ) .. ။
အဟီး... စတာနော် ။:D:D
သြော်... ဒါနဲ့.. ကို Istein ကြီးရဲ. Universe Girlfriends ဆိုတာတွေကို...
မွေးနေ့ရှင်ကပြန်ပေးတဲ့လက်ဆောင်အနေနဲ့.. MZ က နောင်တော် ၊ ညီတော်တွေကိုပြန်ပြီး share သွားပါလားလို့... ။ နော်... နော် .. အဟိ ။
(ကျန်တဲ့... Computer technology တွေကိုမရှဲလ်ချင်ရင်နေ..။ ရတယ်နော် ။ အဟီး..အနော်ကစတာပါ)...။:D:P:D:P
ကိုiစတိုင်း ရေ..အနော်လဲအခုမှာ မွေးနေ့ဆုတောင်းတာမြင်လို့...
အရင်လိုဘဲ...ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ပက်ပက်စက်စက်/ပိုးဆိုးပက်စက် ချောတယ်ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ် အတိုင်းနေသွားနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်..............
ကိုအိုင်းစတိုင်းရေ ကျွန်တော် သူများတွေထက် တစ်ရက်နောက်ကျသွားတယ်ဗျာ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်ကို တစ်ဝိုင်းသပ်သပ်ကျွေး။
မွေးနေ့မှ စ၍ နောင် နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ....
ကျွန်တော်လည်း ပါမယ်နော်.. :d
ဪ တော်တော်တောင်နောက်ကျသွားတယ်ထင်ပါ့။ ဘာကျန်သေးလဲစားဖို့။ စာကြွင်းစားကျန်ပဲရှိတော့တယ်လို့မပြောနဲ့။ ကို Computer ပြောသလို တဝိုင်းသပ်သပ်ပြန်ကျွေးဗျို့။
ကိုOrbs.7 လေယာဉ်ပျံက မင်္ဂလာဒုံမှာ မဆင်းပဲ ဘယ်နှဲ့အင်းစိန်ရောက်သွားတာတုံး။ Istein ကကျော်ဇောတယ်ဆိုပြီး အဲဒီလိုမလုပ်ရဘူးနော်။
ယူကြပါဗျာ။ ကျွန်တော်ကပေးချင်နေတာ။ သူတို့က မသွားပဲ Istein ကိုပဲအတင်းတွယ်ကပ်နေကြတယ်။:D ဟိုတလောကပဲ Istein's Universe of Girlfriends (IUG) အဖွဲ့ဝင် Korean မင်းသမီးတယောက်ပေါ့။ Istein ကသူများကို လက်ဆောင်ပေးမယ်ပြောလိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေသွားရှာတယ်ဗျာ။:(( (ပြောရင်းဆိုရင်း ကျောတောင်ချမ်းလာပြီ):14:
ကျွေးပါ့မယ် ဘယ်မှာဝိုင်းမှာလဲ အဲလေ ဘယ်မှာစားမှာလဲပြော:D
ကိုညမီးအိမ်ကလဲ ကျန်ပါသေးတယ်ဗျ Trader မှာ။ ကြိုက်သလောက်တာစား အားနာစရာမလိုဘူး။ ပြီးရင် ကိုစေတန် စာရင်းထဲထဲ့လိုက်။
ဟိုတရက်က ကိုညမီးအိမ် ကျွန်တော့မျက်နှာကို မီးမှုတ်ထားမှတော့ ပိုးစိုးပက်စက် မချောမှာမပူနဲ့တော့။:D
Istein is just fooling us. Go and see his profile. You will see
his DOB: October 15, 1995 (13). We didn't know about that and celebrate his brithday. LOL
Or maybe 13th anniversary of marriage. )
But the date and month is real. But minus 10 from year. Thank for your present. But i can't eat it. How can I do to eat it.:D
Happy birthday Ko Istein:):):):)
Happybirthday ပါ ကို အိုင်းစတိုင်းကြီး...။
ကို အိုင်းစတိုင်းကြီး ဒီနေ့မှစပြီး နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ ဒီထက်မက ရှည်နိုင်ပါစေ (အသက် ကိုပြောတာနော်)။
သြော် New post တွေ လည်းတင်ဦးလေဗျာ။
ဒီမှာ ဆက်တငံ့ငံ့ နဲ့ဗျ။